Iimpazamo ezisekelwe kwiSayensi ezisekelwe kwiiFilimu
Iimpazamo ezigqithisileyo zeSayensi kwiimifanekiso
Ulindela iimpazamo kwizesayensi zengqungquthela ngenxa yeengcamango. Kodwa kukho inkolelo eninzi kakhulu ongayigqiba phambi kokuba ibhayisikobho iwele umgca ukusuka kwizinto eziqingqiweyo zibe yinto enqabileyo. Mhlawumbi ungomnye weenhlanhla ezincinci ezinokuthi udlule phambili iimpazamo kwaye ujabulele ifilimu. Sonke siyabaleka kwindawo yokumisela okanye sitshintshe iqhosha lokukhangela kwi-Netflix. Nangona kukho iimpazamo ezingenakubalwa ezenziwe kwimbali ye-movie, makhe sijonge ezinye zezona ziphoso ezicacileyo kunye (ngokudabukisayo).
Awunakuva Iimvumi kwindawo
redhumv / Getty Izithombe
Masijamelane nayo: indawo yokulwa kwizesayensi zengqungquthela ziza kuba zingenakudla ukuba kwakungekho nasisandi. Sekunjalo, oko kuyinyani. Isandi luhlobo lombane olufuna i-medium ukuze kuhanjiswe. Akukho moya? Ayikho "i- pew-pew-pew " yama-lasers esithuba, akukho ukuqhuma kweendudumo xa i-spaceship igxuma. Ifilimu "yezilwanyana" ilungile: Esikhathini, akukho mntu unokuva ukukhala.
Ukufudumala kweMhlaba jikelele akunakukhukhula kuMhlaba
I-Dominique Bruneton / Getty Izithombe
Ngelixa iilers ezizwakalayo kunye nokuqhuma kuxoxwa ngenxa yokuba zenza iibhayisikobho zizonwabisa, ingcamango yokuba ukufudumala kwehlabathi kungenza "i-Waterworld" iyinkxalabo kuba abaninzi abantu bayakholelwa. Ukuba yonke i-ice caps kunye ne-glaciers iyanyibilika, inqanaba lolwandle liya kuvuka ngokwenene, lungeke liphakame ngokwaneleyo ukukhukula umhlaba. Umgangatho wolwandle wawuza kuphakama ngamanqina angama-200. Ewe, loo nto yayiyintlekele kwimimandla yolunxwemeni, kodwa ingabe iDenver yayiza kuba yipropati yangaphambili? Hayi okuninzi.
Awukwazi Ukulondoloza Umntu Owela KwiZakhiwo
i-stumayhew / i-Getty Izithombe
Kuyafaneleka ukuba ubambe ikati okanye umntwana owela kwisakhiwo sesibini okanye sesithathu sakhiwo. Amandla apho into exabana nayo ilingana namaxesha ayo amaninzi ukukhawuleza . Ukukhawuleza ukusuka ekuphakameni okuthobekileyo akusibi kakhulu, kunye neengalo zakho zingenza njengento yokuphazamiseka.
Ukukhululwa kweHerosi kuya kuba yinto encinci njengoko ufikelela phezulu kuba unayo ixesha lokufikelela kwisantya. Ngaphandle kokuba uhlaselwe yintliziyo yentshutshiso, akusilo ukuwa okukubulala. Ukuhlahlela ukuqhuma. Qikelela ukuba? Ukuba iintlanga eziphezulu emva kokuba zikuhlwithe kude nomhlaba ekugqibeleni ukuhamba kwangoko, usaphila. Ukufika kwizandla zikaSuperman bekuza kutyhubela umzimba wakho phezu kwayo yonke imisonto ye-blue spandex kunokuba uqhube umqhubi ngenxa yokuba uya kumbetha uMntu we-Steel ngokukhawuleza njengokuba wawuza kubetha phantsi. Ngoku, ukuba i-superhero ikuxosha, ibamba kunye nawe, kwaye iyancipha, unokwazi ukuma ithuba .
Awukwazi ukusinda kwiNtsundu eMnyama
I-Getty Izithombe / DAVID A. IKHODI / ISAYENSI I-PHOTO LIBRARY
Uninzi lwabantu luyakuqonda ubuncinane kwiNyanga (malunga ne-1 / 6th) kunye ne-Mars (malunga ne-1/3) kunye nokunye kwi-Jupiter (2 1/2 amaxesha ngaphezulu), kodwa uya kudibana nabantu abacinga ukuba umbane okanye umntu basinde kwindawo emnyama . Ubunzima bakho njani kwiNyanga ehlobene nokuhlala kwindawo emnyama? Izimbobo ezimnyama zenza umonakalo omkhulu wokutsala ... imiyalelo yobungakanani obukhulu kuneleyo yeLanga. Ilanga ayiyiyo ipharadesi yeeholide, nangona kwakungekho isicyukliya eshushu ngenxa yokuba unokulinganisela ngaphezu kwamawaka amabini amawaka apho. Uza kugxothwa njengegciwane.
Kwakhona ugcine engqondweni ingqungquthela yokudonsa incike kumgama. Iincwadi zezesayensi kunye nama-movie zifumana le nxalenye ngokufanelekileyo. Okuqhubekayo ukusuka kwindawo emnyama, ngcono amathuba akho okuphula. Kodwa, njengoko usondela kufutshane, amandla atshintshe ngokulinganayo kwinqanaba lomgama. Nangona unako ukusinda ubunzima obukhulu, uya kuba yinto yokugcoba ngenxa yokumahluko kumandla adonsela kuyo inxalenye yendawo yakho yomzimba okanye umzimba xa uthelekiswa nomnye. Ukuba uye wakha kwenye yezo zifanisi zeemoto ze-jet simetators ezikuhlahlela ukuya kwi-4-g, uya kuqonda ingxaki. Ukuba ujikeleza kwaye uhambisa intloko yakho, uziva umehluko kwi-Gs. Ukuhlekisa. Beka oko kwinqanaba le-cosmic, kwaye liyingozi.
Ukuba usinda kwindawo engummnyama, ngaba uya kugqiba kwezinye izinto eziyingqayizivele? Akunakwenzeka, kodwa akukho mntu uyazi ngokuqinisekileyo.
Awukwazi Ukukhulisa Iimifanekiso Zamafutha
Iimpawu zoBume beMifanekiso / i-Getty Izithombe
Iphutha lezesayensi elilandelayo lihamba ngokukhawuleza kwintlola, kunye neencwadi zezesayensi kunye neefilimu. Kukho umfanekiso we-grainy okanye umfanekiso wevidiyo womntu, apho ikhomputha iqhubela inkqubo ukuvelisa umfanekiso ocacileyo. Uxolo, kodwa inzululwazi ayinakongeza idatha engekho. Ezi nkqubo zekhompyutheni zidibanisa phakathi kweesalathisi ukuhambisa umzobo, kodwa azifaki iinkcukacha. Ngaba isalathisi esisetyenzisiweyo singasetyenziselwa ukunciphisa abasesikrokre abanokwenzeka? Ngokuqinisekileyo. Ngaba umfanekiso unokuphuculiswa ukubonisa iinkcukacha? Nope.
Ngoku, kukho iikhamera ezikuvumela ukuba utshintshele ingqwalasela emva kokuba umfanekiso uthathwe. Umntu oneteksi-savvy unokuhlaziya loo mfanekiso ngokutshintsha ingqwalasela, kodwa usebenzisa idatha esele ifayile, engayifaki isebenzisa i-algorithm. (Kusengcono kakhulu.)
Ungalokothi uthathe i-Helmet yakho yendawo kwenye Iplanethi
Roberto Muñoz | Pindaro / Getty Izithombe
Uhlala kwelinye ihlabathi, igosa lezesayensi lihlalutya umoya weplanethi kwaye litsho licebile oksijini, kwaye wonke umntu uyasusa iinqununu zendawo eziphazamisayo. Nope, akuyi kwenzeka. Imoya ingaba ne-oksijeni kwaye ihlale ibulalayo. I- oksijini eninzi ingakubulala , ezinye iigesi zingasetyha, kwaye xa iplanethi isekela ubomi, ukuphefumla umoya kuya kubangela ukuba ungcolise i-ecosystem. Ngubani na owaziyo ukuba yiyiphi i-microbes engafanelekileyo enokuyenza kuwe. Xa uluntu luvakatye elinye ihlabathi, iifowuni aziyi kukhethwa.
Ngokuqinisekileyo, kufuneka ufikelele kwisigxina sokususa isigqoko sakho kwimiboniso yeefilimu kuba ngokwenene, ngubani ofuna ukujonga ingcamango engqondweni?
Awukwazi ukubona iLaers in Space
I-Thinkstock / Getty Izithombe
Awukwazi ukubona ama-lasers kwindawo. Ininzi, awukwazi ukubona imilasi ye-laser kukho konke, kwaye yile nto:
Amakhanda alawula ngokungenakwenzeka kwi-intanethi kwaye ufunda le nqaku ekhompyutheni, ngoko ke nangona ungenayo i-feline, uyazi uthando lweekati zokuxosha i-Red Dot. Iphasti elibomvu lenziwa li-laser elingabizi. Yicatshulwa kuba i-laser esinikiweyo esingaphantsi ayisebenzisani kunye neengqungquthela ezaneleyo emoyeni ukuvelisa intonga ebonakalayo. Ama-lasers aphakamileyo aphakamileyo akhipha ama-photons angaphezulu, ngoko kukho ithuba elingakumbi lokukhupha i-particle yomhlaba ongaqhelekanga kunye nethuba elikhulu uza kubona ithambeka.
Kodwa, iincinci zothuli zimbalwa kwaye ziphakathi kakhulu kwi- kufuphi-vacuum space . Nangona ucinga ukuba iil lasers ezithe zagqitywa kwiinqwelo ze-spaceship zinamandla kakhulu, awuyi kubona. I-laser-grade laser yayiza kubhidliza ngokukhanya okunamandla ngaphandle kwembonakalo ebonakalayo, ngoko awuzange ukwazi ukuba yintoni ekubethayo. I-lasers engabonakaliyo iya kuba yinto ebangelisayo kumabhayisikobho, nangona kunjalo.
Amanzi Utshintsho Umqulu Xa Ukhulula Kwiqhwa
Momoko Takeda / Getty Izithombe
"Usuku Ngemuva Kwangomso" wahamba kunye neengcamango ezinzulu zokuguquka kwesimo sezulu . Nangona kukho imingxuma emininzi kwenzululwazi yale flick ekhethekileyo, omnye usenokuba uqaphele ukuba ukukhupha ichweba laseNew York kuwuguqule ibe yinto enkulu yokwenza i-skating rink. Ukuba unokwenza umonakalo omkhulu wamanzi, uya kwandisa. Amandla okwandiswayo aya kukuchoboza iinqanawa nezakhiwo kunye nokuphakamisa umgangatho wolwandle.
Ukuba usunqabile isiselo esithambileyo, ibhiya, okanye ibhotile yamanzi, uyazi ukuba imeko efanelekileyo kakhulu yimeko yokusela. Nangona iimbotyi zizinzileyo kule mihla, ibhotile ibhentshile okanye inako isenokukhupha ngaphandle kwaye mhlawumbi iyaqhambuka. Ukuba unomthamo omkhulu wamanzi ukuqala, ufumana umphumo omkhulu xa loo manzi aguquka kwiqhwa.
Uninzi lwamafilimu efilosofi afaka imisebe yefriji okanye nayiphi na indlela yokuqhwala ngokukhawuleza nje ukutshintsha amanzi kumanzi, kungekho tshintsho kwimiqulu, kodwa oko akusiyo indlela amanzi asebenza ngayo.
Ukusika ii-Engines Awuyi Kuyeka i-Spacecraft
IMITHETHO YEHABBICK IMIBONO / i-Getty Izithombe
Uxoshwa ngabafokazi ababi, ngoko uyibhalela kwisibhanki se-asteroid, usike iinjinjini, umise umkhombe wakho, uze udlale ufile. Uya kujonga nje ngelinye ilitye, kunjalo? Ngalunganga.
Amathuba kukuba, kunokudlala umdlali, uya kufa ngokwenene, kuba xa usika ii-injini isithuba sakho sepasti sisasazi phambili, ngoko uya kushaya ilitye. "Inkwenkwezi yeNkwenkwezi" yayinkulu ngokungawunaki uMthetho wokuQala wokuQala weNewton , kodwa mhlawumbi uye wambona ikhulu ukususela ngelo xesha kwezinye iikhompyutha kunye nemiboniso.
Ukuguqula amaCubic Centimeters ukuya kwiLitha
Isibonelo seNernst Equation Inkinga
Umyinge weNkunkuma yokuSasaza
IiCubic intshi ukuya kwiCubic Feet Conversion
Indlela yokudweba isakhiwo sika Lewis
Ukuguqula amasentimitha ukuya kumitha (cm ukuya m)
Ukushisa Inkcazo kwiSayensi
UFrancesco Redi: uMsunguli weBiyoloji yezilwanyana
X Ray Inkcazo kunye neZakhiwo (X Radiation)
Ngaba i-Negative pH inokwenzeka?
Mad Scientist Imifanekiso
IiNkcazo zeNzululwazi kunye neTrivia
NgeCawa egazini: Ukuqala kweRussia Revolution ye-1917
Indlela Ukuphakama kweBebop kwatshintsha ngayo iJazz
Ngaba Unako ukutyala iPine Cone kwaye Ukhule Umthi?
Izinto ezingapheliyo kwiiJamani
I-Chicago (iqela): I-Jazz-Rock Crosses
Umdla Wokuqala Wokutya
Ngaba kufuneka ndibe namandla ukuya kuHlahla kweR Rock?
Iingenelelo kunye Nezilungelo Zabahloli beSpell
10 Udlala ngo-Agasti Wilson - I-Cycle Pittsburgh
10 I-Chlorine Facts (Cl okanye Inomic Number 17)
I-Warped Tour 2009
Yintoni Eyona Ntsi ngiselo Yokuguquguquka?
Ukujonga kwiiNyathelo kunye neZilungiso zokuLawula abantu abanokukhubazeka
Indlela yokujongana neCandelo elijongene nomkhombe
Iinqununu ezi-8 ezichazwe ngokucacileyo Njani i-Tough i-US Open
Ukuthandazela Ukukhululwa Kubungqingili
Ngaba Izilwanyana Ziya Ezulwini ?: Emva kokufa Kwezilwanyana zezilwanyana
Indlela yokuthenga kunye nokukhetha iiSikethi zeSiqwenga seSkring Skating
I Krismesi ephakathi
Funda ukubala ngaphezu kwe-10 000 ngesiTshayina
Indlela yokuphilisa ngokomoya yokubeka izandla